Kindle Paperwhite vs iPad | Vaovao IPhone
Amazon, mpanamboatra fitaovana Kindle, dia nandefa tamin'ny alàlan'ny fantsona YouTube azy, horonan-tsary iray izay ny Kindle Paperwhite dia ampitahaina amin'ny iPad sy ny takelaka hafa. Raha oharina amin'ny fampitahana, dia mifandraika amin'ny fahitan'ireo fitaovana amin'ny toe-javatra mamiratra ihany ary mifantoka amin'ny fahafahan'ny mpamaky boky.
Mampiseho ireo mpampiasa tsotra ilay horonan-tsary, nasaina hipetraka amin'ny sofa ary hijery ny Amazon's Paperwhite eReader. Ny olona rehetra amin'ny horonantsary dia maneho hevitra amin'ny famakiana boky amin'ny fitaovana hafa sy manondro ny mety an'ity fitaovana ity amin'ny famakiana. Ny mpampiasa sasany dia miresaka momba ny iPad ary mampitaha azy amin'ny fitaovana izay namboarin'i Amazon, natao manokana amin'izany. Amazon manana rindranasa ianao ao amin'ny App Store antsoina hoe Kindle hamaky ireo boky novidiana teo amin'ny lampihazoo.
Ny horonantsary dia miompana amin'ny fampisehoana ny kalitaon'ny fampisehoana e-ink an'ny Kindle, izay nohamarinina hamaky amin'ny hazavana mamiratra, indrindra ny an'ny masoandro (mipetraka amin'ny faritra amoron-dranomasina aho ary hitako foana fa mitondra an'io karazan-fitaovana io ho any amoron-dranomasina ny olona noho ny fahatsorana mamaky azy ireo noho ny karazana efijery izany tolotra izany). Ny karazana efijery an'ny eReader dia mifanohitra amin'ny efijery LCD an'ny iPad, izay tokony hiezahanao tena hahay hamaky mazava tsara rehefa mahita jiro be loatra isika.
Zavatra toa azy ireo. Ny efijery Paperwhite tsara ho an'ny famakiana ivelany, ny mifanohitra tanteraka amin'ny iPad ihany, fa araka ny efa nanamarihako teo aloha, ny fampitahana dia somary mifandraika. Ny iPad dia tsy fitaovana iray miompana amin'ny famakiana boky fotsiny, mihoatra lavitra noho izany. Afaka milalao lalao ianao, manitsy antontan-taratasy, mandefa mailaka, mihaino mozika, mijery sarimihetsika matetika.
Mandoa vola bebe kokoa amin'ny fitaovana iPad (modely na inona na inona) nohamarinina amin'izay rehetra azonao atao amin'izany. Raha ny asany ihany no nitovy tamin'ny Amazon eReader dia tsy hahomby tamin'ny tsena toa azy.
Fanazavana fanampiny - Ny fampiharana Kindle dia manery ireo mpampiasa hanavao miaraka amin'ny kinova vaovao
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » fifaninanana » Kindle Paperwhite vs iPad
Nirehitra aho (izay tapaka roa andro lasa izay) izao mitady mitady solony aho, fa raha manam-bola aho dia hividy mandrehitra hafa satria tao anatin'ny 3 taona dia tsy nanome olana tamiko izany (nianjera tamin'ny tany izy ary efa vaky ny efijery). Lazain'ny olona amiko ny antony itadiavako iray hafa raha manana ipad aho… Ary asaiko manandrana mamaky ora 4 mahitsy amin'ny ipad izy ireo ary hahafantatra ahy izy ireo. Ny ipad dia tsy ny tsara indrindra amin'ny famakiana boky lava satria mandoro ny masonao amin'ny jiro amin'ny efijery.
Na dia lafo be amintsika aza ny mino azy dia misy olona maro izay mividy takelaka fotsiny hamakiana fotsiny dia ampy ny mandeha amin'ny làlambe kely ary ho hitanao izany, ary izany no mahatonga ahy mieritreritra fa navoakan'izy ireo ity fampielezan-kevitra ity.
Ny olona te-hamaky sy hividy takelaka ho azy, dia toy ireo izay te handeha hitsangatsangana an-tendrombohitra sy hividy kapaoty plush: afaka hiara-dia amin'izy ireo eny an-tendrombohitra izy ireo fa ho hitantsika ny fijerin'ny tongony ny fiafaran'ny dia.
Raha te hamaky boky tsara dia tsy maintsy mividy e-ranomainty e-ink ianao. Ny zavatra hafa rehetra dia kapaoty plush, na manana ny "i" eo ​​alohany izy na tsia.
Kitendry hitsin-dàlana ho an'ny iPhone sy iPad